Vato sarobidy: inona avy ireo, toetra sy fiaviana | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 16/02/2021 12:07 | Haibolantany
Androany isika dia hiresaka momba ny iray amin'ireo fitaovana izay avy amin'ny tsinain'ny planetantsika ary an'ny an'ny vondrona fitaovana fatratra indrindra eran'izao tontolo izao. Momba ny vato soa. Izy ireo dia fitaovana manana hatsarana izaitsizy ary misy dikany maro izay tombontsoa ara-batana sy ara-tsaina lehibe no atolotra noho ny finoana sy ny angano miaraka amin'ireo vato ireo.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao ny toetra rehetra, ny fiaviany ary ny fampitahana ireo vatosoa.
1 Inona ireo vatosoa
2 Fanasokajiana vatosoa
3 Fananana sy toetra mampiavaka azy
4 fahita firy
Inona ireo vatosoa
Ny voalohany indrindra dia ny fahalalana hoe inona no fiheverana ny vatosoa. Momba an'io akora mineraly, tsy mineraly ary vatolampy izay nampiasaina hanamboarana kojakoja isan-karazany amin'ny sehatry ny firavaka, asa-tanana ary ho vato firavaka ary ny fiaviany dia ny vovoky ny tany. Noho ireo vato ireo dia azonao atao ny manao peratra, haba-tànana, rojo vy, pendant, rojo, sns.
Mba hahazoana fitaovana iray heverina ho vato sarobidy na semi-sarobidy, dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny toetra sy toetra sasany izy io. Amin'ireo toetra rehetra ireo dia hampidirintsika ny hamafiny, ny hatsarany, ny lokony, ny famirapiratany, ny faharetany ary ny fahalana. Tsy mahagaga raha ny vatosoa tsy fahita firy dia ny vola bebe kokoa eo an-tsena. Ny iray amin'ireo anarana izay raisin'ireto fitaovana ireto dia ny vatosoa, vatosoa ary talisman.
Izy ireo dia avy amin'ny vato, mineraly, vera na vokatra voajanahary hafa izay azo nohosorana na nokapaina mba hamoronana fifangaroana avo lenta. Tsy mitady mividy peratra avo lenta izahay fa hitady izay manana vato tsara manana toetra tsara. Ny sasany amin'izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny fanahafana ny herinandro vitsivitsy satria manana endrika mitovy izy ireo saingy tsy manana fahalavorariana sy hatsarana mitovy.
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'izy ireo dia mazàna mafy ary, na dia mety manana mineraly malefaka aza izy ireo, dia omena lanja mahafinaritra noho ny hatsaran-tarehiny sy ny fahakaloziny.
Araka ny efa nampoizina, arakaraka ny fihaviany sy ny toetrany, ny vato sarobidy sy semi-sarobidy dia azo sokajiana. Mazava ho azy fa voasokajy ho vato tsy an-kolo mineraly, vato organika ary mineraloida izy ireo. Andao hojerentsika hoe inona avy ireo toetra mampiavaka azy ireo:
Vato mineraly tsy miorina: dia ireo rehetra izay raisina ho toy ny mineraly tsy misy fotony. Mampiavaka azy ireo indrindra ny fananana raikipohy simika voafaritra sy ny rafitra kristaly voafaritra. Ireo vato mineraly tsy mitongilana ireo dia namboarina natiora. Matetika izy ireo no natiora mahazatra sy be mpampiasa indrindra. Iray amin'ireo antony mahatonga azy ireo matetika manana vidiny somary ambany kokoa ary tsy dia omena lanja loatra.
Vatosoa voajanahary: dia ireo izay tsy raisina ho mineraly. Ny anton'izany dia satria izy ireo dia noforonina tamin'ny alàlan'ny hetsika biolojika iray velona. Ohatra, manana ny vato amber isika izay noforonina tamin'ny alàlan'ny famafana resina nandritra ny taona maro avy tamin'ny hazo taloha. Araka ny antenainao, ity karazana vatosoa ity dia sarobidy kokoa noho ireo izay fahita matetika. Ary izany dia an'arivony sy an'arivony taona maro no tsy maintsy mandalo ny rindrina hamirapiratra toy izao. Ny perla dia ohatra iray hafa amin'ny vatosoa voajanahary. Izy io dia noforonina noho ny fihetsika biolojika an'ny oysters.
Vatosoa Mineraloid: Ireo rehetra ireo dia fitaovana tsy mineraly satria tsy manana rafitra kristaly na singa simika voafaritra tsara izy ireo. Eto no ahitantsika ny vondrona opal sy obsidians.
Fananana sy toetra mampiavaka azy
Ny fomba tsara indrindra hanasokajiana ireo vatosoa rehetra dia ny fanaovana azy amin'ny lokony, ny toetrany ary ny toetrany. Ho hitantsika ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka ireo fitaovana ireo. Mba hahazoana fitaovana iray heverina ho vato sarobidy dia tokony hihaona amin'ny toetra sy toetra sasany izay mahatonga azy io hanana toetra miavaka amin'ny fomba voajanahary. Andao hojerentsika hoe inona ireo toetra sy toetra ireo:
Hatsaran-tarehy: ny hatsarana dia omen'ny endriny sy ny lokony. Izy io koa dia misy ifandraisany amin'ny mangarahara na famirapiratana. Mba hanaovana vatosoa manana hatsarana avo dia ilaina ny mampiditra zavatra simika ao amin'izy ireo. Zava-dehibe tokoa ny ahafahana manao azy manintona ny lisitry ny mpividy.
Faharetana: Ny faharetana dia misy ifandraisany amin'ny fahafaha-manohitra ny voarangotra amin'ny hafa na amin'ny kapoka na fanerena rehetra. Azonao atao ihany koa ny mankasitraka ny fanoherana an'ity fitaovana ity amin'ny alàlan'ny akora simika isan-karazany sy ny fampiasana isan'andro izay matetika atrehiny.
Color- Azo raisina ho endrika manan-danja indrindra tokony hanananao manana sanda lehibe. Anisan'ireo vatosoa be mpitady indrindra isika manana ireo manana loko maitso, mena ary manga tsara tarehy. Ny kely mitsiriritra dia fotsy, mangarahara ary mainty. Tsy maintsy dinihiko ihany koa ny tsirin'ny tsirairay.
Famirapiratana: dia manondro ny fahaizany manome taratra ny hazavana amin'ny endrik'izy ireo na ny ivelany. Matetika izy ireo dia tafiditra ao amin'ny taratry ny reflexion, ny fielezana, ny fanaparitahana ary ny fiasa amin'ny hazavana avy amin'ny tontolo iainana. Raha vatosoa iray afaka mamela ny hazavana handalo ny kristaly dia heverina ho vato manana kalitao avo kokoa izany. Arakaraka ny maha-be azy io, ny vidiny ambany dia lafo ary amidy amin'ny vidiny ambany.
Ho an'ny tsy fahita firy dia hanokana andalana na zavatra midadasika kokoa izahay satria misy ifandraisany amin'ny fahasarotan'ilay vato izany rehefa takiana fa efa an-taonany maro izy io. Zava-poana ny vato raha avo amin'ny toetra rehetra voalaza etsy ambony raha tsy hita. Ireo vatosoa ireo dia matetika tsy manam-paharoa ary tsy maninona izay vidiny, Mila manombatombana ny fizotra izay natao mba hahafahana mamadika ireo vato ireo ho firavaka.
Arakaraky ny vato no mahasarotra ny fahitana azy dia lafo kokoa matetika izy io ary maniry fatratra. Ny olombelona dia naniry ny hanana ny sarotra indrindra. Iray amin'ireo antony mahatonga ny vatosoa tsy fahita firy eto an-tany zaraina amin'ny olona vitsivitsy. Ireo olona ireo ihany no afaka mandoa izay vidiny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny vatosoa sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Vato sarobidy